Bit By Bit - Ikusasa - 7.2.1 I Ukuxubana Readymades futhi Custommades
Akekho phakathi emsulwa isu Readymade noma Custommade isu emsulwa isebenzisa ngokugcwele amakhono yobudala digital. Esikhathini esizayo siyaphi ukudala nzalo.
Esethulweni sayo, mina waqhathanisa isitayela Readymade of Marcel Duchamp ne Custommade isitayela Michelangelo. Lokhu kungafani futhi ithumba umehluko phakathi ososayensi idatha, ngubani bathambekele ukusebenza nge Readymades, futhi ososayensi bezenhlalo, ngubani bathambekele ukusebenza nge Custommades. Nokho, Esikhathini esizayo, ngilindele ukuthi sizobona nzalo more ngoba ngamunye kulezi zindlela okuhlanzekile kulinganiselwe. Abacwaningi abahlole kuphela abafuna ukusebenzisa Readymades bazoya azabalaze ngoba kukhona Readymades hhayi eziningi ezinhle emhlabeni. Ngakho, abacwaningi ababambelela kule isitayela obumsulwa noma uya ukudela izinga ngokusebenzisa Readymades ugly, noma bazobambisana ukuchitha isikhathi esiningi ngifuna urinal ephelele. Abacwaningi abahlole kuphela abafuna ukusebenzisa Custommades, ngakolunye uhlangothi, bazoya ukudela ngezinga. Nokho, izindlela Hybrid, zingahlangana esikalini eliza Readymades ne kufanelekile Friend phakathi umbuzo kanye nedatha Ovela Custommades.
Sabona izibonelo zalezi nzalo ngayinye izahluko ezine enokwehla. ESahlukweni 2, sabona ukuthi i-Google Flu Amathrendi ihlanganisa i njalo-on big idatha system (semibuzo yakho yosesho) nge nesilinganiso Lwebulungisa okungenzeka-based (CDC Umkhuhlane ukubhekwa uhlelo) ukuze kukhiqizwe tilinganiso ngokushesha (Ginsberg et al. 2009) . ESahlukweni 3, sabona indlela uStephen Ansolabehere futhi Eitan Hersh (2012) kuhlangene zedathamininikwane oklanywe ngokukhethekile nahulumende idatha ngomumo eyenziwe zokuphatha ukuze ufunde kabanzi mayelana nezici zabantu empeleni bavote. ESahlukweni 4, sabona indlela OPower ukuhlolwa hlanganisa ngomumo eyenziwe kagesi nesilinganiso kwengqalasizinda nge ukwelashwa oklanywe ngokukhethekile ukutadisha imiphumela yamazinga social on nokuziphatha ngezinga elikhulu (Allcott 2015) . Ekugcineni, eSahlukweni 5, nganitshela ukuthi uKenneth Benoit kanye nozakwabo (2015) sisetshenziswa inqubo isixuku-esephepheni oklanywe ngokukhethekile isethi ngomumo ezenziwe manifestos adalwe amaqembu ezombusazwe ukuze adale idatha ukuthi abacwaningi angasebenzisa ukutadisha ukhetho kanye Dynamics mpikiswano inqubomgomo.
Lezi zibonelo ezine zibonisa ukuthi isu onamandla esikhathini esizayo kuyoba yokucebisa big idatha imithombo, ezingafaneleki eqoqwe ucwaningo, ulwazi olungeziwe okubenza ekahle ucwaningo (Groves 2011) . Kungakhathaliseki iqala ngamadijithi Custommade noma Readymade, lesi sitayela hybrid kunesithembiso ezinkulu izinkinga eziningi ucwaningo.